May 13, 2019 - CeleLove
ယောကျာ်းတွေ ဝေးဝေးရှောင်သင့်တဲ့ မိန်းမ အမျိုးအစားများ …
May 13, 2019 Cele Love 0
ယောကျာ်းတွေ ဝေးဝေးရှောင်သင့်တဲ့ မိန်းမ အမျိုးအစားများ … ပြဿ နာ တစ်ခုဖြစ်တိုင်း ယောက်ျားလေးတွေကိုပဲ အပြစ်တင်လို့ မရတဲ့ အခြေအနေတွေရှိပါတယ်။ မိန်းမ တွေကြောင့်လည်း အမှားတွေဖြစ်စေပါတယ် ။ လူတိုင်းအမှားနဲ့ မကင်းတာက သဘာဝမို့ အိမ် ထောင်ပြုဖုိ့ စဉ်းစားတော့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုမိန်းမတွေကို ဝေးဝေးကရှောင်ပါ။ ဘယ်တော့မှ […]
ပျံ့နှံ့နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိစ္စသင်ဇာဝင့်ကျော်ပြောပြီ ရုပ်ရှင်ကားတွေများစွာ ဗီဒီယိုကားတွေများစွာနဲ့ ပရိသတ်အားပေးမှုကို ရယူထားနိုင်သလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပုရိသယောက်ျားတွေ မက်မောရလောက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်း အားကျရလောက် Sexy ကျတဲ့ အမိုက်စား ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကြောင့် ဝေဖန်ခံရမှု များနေတဲ့ မင်းသမီးသင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းက ပရိသတ်တွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ အံ့အားသင့်စေမယ့် အရာတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် […]
ဟော်တယ် (၁၁) ထပ် အမြင့်ကနေ ပြုတ်ကျသွားတဲ့ (၅) သမီးလေး CCTV မှတ်တမ်း ဗွီဒီယိုဖိုင်
ဟော်တယ် (၁၁) ထပ် အမြင့်ကနေ ပြုတ်ကျသွားတဲ့ (၅) သမီးလေး CCTV မှတ်တမ်း ဗွီဒီယိုဖိုင် ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန်ဘူရီခရိုင် ဘန့် လမုန် မြို့ မှာ ၁၁ ထပ် ဟိုတယ် အမြင့်ကနေ ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့ (၅) နှစ်သမီးလေးရဲ့(ဒဏ်ရာပြင်းထန်) […]
ပူလွန်းလို့ နောက်ဖေးတံခါး ဖွင့်အိပ်လိုက်မိတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ဖြစ်ရပ်
ပူလွန်းလို့ နောက်ဖေးတံခါး ဖွင့်အိပ်လိုက်မိတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ဖြစ်ရပ် ပူအိုက်သဖြင့်နောက်ဖေးတံခါး ဖွင့်ပြီးအိပ်နေတဲ့မိန်းကလေးမိနစ် (၃၀)ခန့်သားမယား ပြုကျင့်ခံရသည် …. ။ ပူအိုက်တဲ့ရာသီမှာ သတိထားပြီးအိပ်ကြပါလို့ ….. ။ အမှုမှာ ၁၁.၅.၂၀၁၉ ရက်နေ့(၂၂၃၀)အချိန် တရားလိုမ——–(၁၈)နှစ် သည် ပူအိုက်သဖြင့် နောက်ဖေးပြတင်းတံခါ အားဖွင့်ပြီးအိပ်ခန်းအတွင်း အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာအိပ်ပျော်သွားပြီး( ၀၂၃၀)အချိန်၎င်း၏ခြေတောက်အား […]
ချစ်သူနဲ့ အဆင့်ကျော်ပြီး လေးနှစ်လုံး တူတူနေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့ အေသင်ချိူဆွေ
ချစ်သူနဲ့ အဆင့်ကျော်ပြီး လေးနှစ်လုံး တူတူနေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့ အေသင်ချိူဆွေ ပရိသတ်တွေ လက်ခံအားပေးထားတဲ့ အဆိုတော် အေသင်ချိုဆွေကတော့ လက်ရှိချိန်မှာ အချစ်ရေးမှာကံအကြောင်းမလှခဲ့တာကြောင့် Single Mother တယောက် အနေနဲ့ ရပ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အေသင်ချိုဆွေကတော့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာ Single Mother တွေကိုလည်း အားပေးစကားတွေ များစွာပြောကြားခဲ့ပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း […]
မန္တလေးပြည်သူများ အားကိုးအားထားပြုနိုင်မည့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှုး စိန်လွင်
မန္တလေးပြည်သူများ အားကိုးအားထားပြုနိုင်မည့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှုး စိန်လွင် ညပိုင်း ဓားကိုင်ပြီး ရမ်းကားနေတဲ့လူမိုက်တွေကိုဖမ်းမိဖို့ ဆိုင်ကယ်တွေတားပြီး လက်နက်ပါ / မပါ စစ်နေရုံနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်မိမှာလဲ …. ။အရပ်ဝတ်နဲ့ ကိုယ်တိုင်အသွင်ယူပြီး အကြိုအကြားမှန်သမျှ ပတ်သွားကြ။ သေနတ်အတိုတွေ ထုတ်ပေးထားတယ် …. ။ ဓားပါတယ်ထင်တဲ့အဖွဲ့ဆိုရင် ဂြိုလ်ကြည့် ကြည့်ပေး၊ဆိုင်ကယ်လီဗာကို […]
အပူချိန်မှာ ၄၇ ဒီဂရီအထိရှိပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အန္တရာယ်ရှိလောက်တဲ့အထိ အပူချိန်မြင့်တက်လာနိုင်
အပူချိန်မှာ ၄၇ ဒီဂရီအထိရှိပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အန္တရာယ်ရှိလောက်တဲ့အထိ အပူချိန်မြင့်တက်လာနိုင် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်မှာ ၄၇ ဒီဂရီအထိရှိပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အန္တရာယ်ရှိလောက်တဲ့အထိ အပူချိန်မြင့်တက်လာနိုင် မုတ်သုံကအ၀င်နောက်ကျ နေ ပြီးမုန်တိုင်းကလည်း ထပ်မဖြစ်သေးတာကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်မှုကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မေလ(၁၅-၂၁)ရက် ရက်တစ်ပတ်အတွင်းကချင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှလွဲ၍ ကျန်တပြည်လုံးတွင် […]
ဖေ့ဘွတ် ပေါ်က ချစ်သူကို ယုံစားပြီး ခရီးဝေးကနေ ချိန်းတဲ့နေရာထိ လိုက်လာမိတဲ့ ၁၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ်
ဖေ့ဘွတ် ပေါ်က ချစ်သူကို ယုံစားပြီး ခရီးဝေးကနေ ချိန်းတဲ့နေရာထိ လိုက်လာမိတဲ့ ၁၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ် ကောင်မလေးက အသက်(၁၄)နှစ်။ နာမည်က မ​အေးသဇင်​ဦး ၁၄နှစ်​ (ဘ)ဦး​အောင်​မြင့်​ (မိ) ​ဒေါ်​ချောစု နာဂဒူး​ကျေးရွာ ​ကော့ကရိတ်​မြို့ ကရင်ပြည်နယ်ကပါ။ ခေါ်ဆောင်တဲ့ ကောင်လေးကတော့ အောက်က […]
Grade-3 ၊ Grade-6 သင်တန်းတွေဟာ လူသတ်ကွင်းဖြစ်နေသလား?
Grade-3 ၊ Grade-6 သင်တန်းတွေဟာ လူသတ်ကွင်းဖြစ်နေသလား? ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Grade-3 ၊ Grade-6 သင်တန်းတွေဟာ လူသတ်ကွင်းဖြစ်နေသလား? အခုတစ်လော ပညာရေးဌာနမှာ Grade-3 . Grade-6 သင်တန်းတက်ရောက်ရင်း ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ဆရာဆရာမတွေဟာ များလာနေပါတယ်…မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆိုးရွားလှတဲ့ ရာသီဥတု အပူဒဏ်ကို အံတုပြီး သင်တန်းတက်နေကြရတာပါ […]
Forever Alone ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေမှာပဲ တွေ့ရနိုင်မယ့် အကျင့် နဲ့အပြုအမှုများ
Forever Alone ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေမှာပဲ တွေ့ရနိုင်မယ့် အကျင့် နဲ့အပြုအမှုများ Forever Alone (FA) ဆိုတာက နာမည်သာ ကြားရတာဆိုးတာ ၊ တကယ်တော့ သူတို့တွေကမှ ဘ၀ရဲ့အနှစ်သာရကို အပြည့်အ၀ နဲ့ ခံစားနေရသူတွေပဲဖြစ်တယ်။ သူတို့စိတ်ကြိုက်လုပ်ချင်တာ လုပ်ခွင့်ရှိသလို ၊ စိတ်ပူစရာ ၊ […]